imfundo | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ubomi bezentlalo nezopolitiko ekupheleni kwenkulungwane ye-18
ezaposwa ngomhla 21.08.2021 21.08.2021
Kweli nqaku, siza kuchaza ngokufutshane ubomi benkulungwane ye-18. ERashiya, Belarus kunye Lithuania, ubudlelwane babo kunye nemvelaphi yezopolitiko.
Unxibelelwano ngolwimi lwasemzini
ezaposwa ngomhla 29.07.2021 29.07.2021
Bonke abantu banobuhlobo kakhulu, kodwa kuthekani ukuba ufuna ulwimi kungekuphela kukhenketho, kodwa nomsebenzi? Masifumane imigaqo esisiseko yokufunda ulwimi.
Iimfihlo ze-Ufo-Uloyiso lweThermal
ezaposwa ngomhla 28.07.2021 28.07.2021
Inqaku elinomdla malunga nendawo, izazinzulu ngeenkwenkwezi zaseSoviet, ezabavumela ukuba bangene nzulu kuphononongo lwendalo iphela!
Kuqala njani ukuxhaphaza, kwaye uphuma njani kwimeko?
Uninzi luye lwahlangabezana nokuxhatshazwa esikolweni, kodwa kuthekani xa ukuhlaselwa kwabantu sele kuqhubeka emsebenzini? Indlela yokuziphatha kunye nokuphuma kwiimeko zongquzulwano.
Yintoni inkululeko kunye nomntu okhululekileyo?
ezaposwa ngomhla 01.02.2021 01.02.2021
Yintoni inkululeko kunye nomntu okhululekileyo? Andithandabuzi ukuba baninzi abawubuzileyo lo mbuzo. Ibiya kubonakala ngathi akunakuba nzima ukuba umntwana aphendule lo mbuzo. Nangona kunjalo, ngaba ungayiphendula ngokukhawuleza nangokufutshane?
Ubutyebi bamandulo bokwazisa ngesondo lomntwana - isithethe okanye indlela yokufumana inyani?
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 03.10.2019
Ukutolikwa kwamaphupha angaqhelekanga: kutheni uphupha ngesikhumbuzo?
I-Ascension Cathedral yaseNovocherkassk: imbali. IShedyuli yeNkonzo
Imisebenzi yemizi. Ukuhlelwa kwedolophu ngemisebenzi: imizekelo
Isixeko asizi kuvela sodwa. Ukusukela ngexesha lokuzalwa kwayo, linxibelelene ngokungenakwahlulwa kunye naluphi na uhlobo lomsebenzi, ongumsebenzi wawo. Iinyani zakudala Imbali yeenkulungwane zoluntu ingqina ...
Izixhobo zeCawe kwiCawa yamaOthodoki
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 04.10.2019
I-Socionics yi ... I-Socionics: itafile yobudlelwane
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 16.10.2019
Kudala-dala ixesha elide njengegama le-socionics. Le ayisiyonzululwazi, kodwa luhlelo olukhethekileyo lweentlobo zobuntu, kunye nobudlelwane obukhulayo phakathi kwabo. Yayisungulwa kumashumi asixhenxe eminyaka yokugqibela ...
Bangakanani abantwana abanako ukusela amandla?
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 20.09.2019
Emva kokungeniswa komthetho kumazwe athuthukileyo ukuthintela ukuthengiswa kweziselo ezihlaziyayo, iRussia ikhathalele impilo yabantu abatsha. Izenzo eziqhelekileyo zenze ukuba ungangaphi xa usela iziselo zamandla. Imfuno yeso sigqibo inxulumene ...
2002 - yintoni isilwanyana? Inkwenkwezi yeMpuma
Icandelo lezobulungisa: imisebenzi kunye nomxholo. Imisebenzi yabasemagunyeni kwezomthetho kwiRussian Federation
Umbuso ngawo onke amaxesha ubume obuthile, eyona nto iphambili kuyo yayingabemi. Nangona kunjalo, isihlwele esikhulu kangaka sifuna ukubekwa esweni rhoqo. Ngaphandle koko, imisebenzi yabo iya kuphuma ngaphandle kolawulo ...
I-Aries kunye neCapricorn: ukuhambelana komqondiso
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 11.11.2019
Ukusekwa kweBhunga likaRhulumente
Ukusekwa kweBhunga likaRhulumente, iqumrhu lokuqala lowiso-mthetho kwi-Russian Empire, kwenzeka ngo-1810. Wajonga amatyala aziswe ngabefundisi ngaphambi kokuba umlawuli awamkele. Ukudalwa kukaRhulumente Duma, njenge ...
Umthetho wokugcina idatha yobuqu ngamazwi alula. Ukhuseleko lweenkcukacha zobuqu eRussia
Idatha yobuqu lulwazi malunga nomntu othile. Abasebenzisi bangenisa olu lwazi kwiiseva ezahlukeneyo ze-Intanethi yonke imihla. Ngo-2015 kwasayinwa umthetho wokugcinwa kweenkcukacha zobuqu. Ngokwale nto…
Page 1 Page 2 ... Page 2 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-78 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-2,483.